Archive du 10-août-2021
Fitondrana Rajoelina Hamaky ady amin’Ambatovy sy ny QMM indray ?
Nandritra ny fandaharana manokana nataony ny alahady 8 jolay lasa teo no namerenan’I Andry Rajoelina ny efa voalaza nandritra Fikaonan-doha PEM SUD ny fiandohan’ny jona,
Tamana amina fomba mandamoka
30 taona lasa sahady koa izay no nisian’ny tolona namaivay nahatonga tondran-dra nananika iny lapam-panjakana eny Iavoloha iny mba hanesorana ny filoham-pirenena tamin’izany fotoana izany teo amin’ny toerany.
Fanadinana bakalorea Miisa 6 ireo marenina miatrika izany
Notanterahina nanomboka omaly alatsinainy 09 aogositra manerana ny Nosy ny fanadinam-panjakana Bakalorea ankapobeny sy teknika .
Firongatry ny dokam-barotra ara-pitsaboana Nampitandrina ny Minisitry ny fahasalamana
Hita etsy sy eroa ny karazam-pitsaboana maro samihafa eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Nampahatsiahy io Minisitra io fa misy karazany roa ny fitsaboana eto Madagasikara dia ny Fitsaboana maoderina,
Arabe sy lalam-pirenena Ny olombelona indray no mandefitra amin’ny omby
Olona nandeha nankany Fianarantsoa sy amin’iny mianatsimo iny no nampahafantatra tamin’ny alalan’ny tambazotra facebook omaly fa tampoka teo dia feno omby ny lalana.Io omaly io ihany teny Andranonahoatra – Itaosy
Resaka « Fonds souverain » Nampitandrina ny Fanjakana i Roland Ratsiraka
Miantso sy mampitandrina ny Fanjakana, mba tsy handoto ny firenena amin’ny fampidirana ny “fonds souverain” ny Depiote Roland Ratsiraka araka ny fanambarana nataony omaly,
Fitondrana Rajoelina Tsy mahomby, tompondakan’ny fanamarinan-tena
Raha misy angamba mpitondra nandetika an-davaka indrindra an’i Madagasikara tao anatin’ny 60 taona, dia ny Fanjakana tarihin’i Andry Rajoelina niainga tany amin’ny fanonganam-panjakana 2009
Lalam-pirenena faharoa Efa manomboka ny asa fanamboarana
Hanomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa taorian’ny kabarin’ny Filoham-pirenena afak’omaly alina ka nilazany fa hojerena avokoa ireo izay maharary ny vahoaka.
Kaominina Betafo Mahomby ny fitantanana, voaloa ny karama nisavovona
Nivoaka ny karaman’ny mpiasa amam-bolana maro tao amin’ny Kaominina Ambonivohitr’i Betafo. Tamin’ny herinandro lasa teo dia nandray karama volana maromaro ny mpiasan’ny Kaominina.
Rajoelina sy Hajo Sinema sa misy ady mangatsiaka ?
Nahitsy ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina ny alahady teo nilaza fa anisan’ny mampiteny ny moana ny RN2, ary mahazo tatitra, mahazo sary, mahazo fitarainana avy amin’ny olona maro be izy.
« Tournée Star » volana jolay Nentanina mba tsy hanary tavoahangy plastika fahatany ny mponina
Toerana efatra no nampiantrano ny « Tournée STAR » nandritra ny volana Jolay lasa teo. Nanombohana ny hetsika ny tany Sabotsy Namehana ny sabotsy 10 Jolay,
Politikam-panjanahana Vao miha mandaitra eto Madagasikara
Zarazarao hanjakana, hoy ny Frantsay fony izy ireo nitantana ny fanjanahantany izay efa nifarana tamin’ny 60 taona lasa mahery saingy efa teti-panorona hifehezana an’i Madagasikara
Zaza feno 10 taona Nanampy zaza marary miisa 10 isaky ny hopitalin-jaza
Amin’ny fo feno fifaliana no hisaorana anareo rehetra tamin’ity anio ity noho ireo firarintsoa maro be nataonareo fa faly be Itokiana namaky ny hafatra,
Fifanolanana amin’ny ben’ny tanàna Hiatrika fitsarana anio i Clémence
Hiakatra fitsarana noho ny raharaha fitorian’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) indray anio 10 aogositra I Clémence Raharinirina, mpanolontsain’ny tanàna lany tamin’ny anaran’ny IRK.
Jean Nirina sy ny ekipany “Mety ny fanapahan-kevitry ny Filoha”
Nivoaka tamin’ny fahanginana ny filoha nasionalin’ny Hafari Malagasy sady filoha tale jeneralin’ny orinasa mpitsabo Malagasy FITRAMA Rafanomezantsoa Jean Nirina omaly